१ सफा चिज चाहिदैन फोहरमा बस्छ
रात भरि आहार खोजी दिन भरि लुक्छ - के हो र ?
२ घुम्ने मेरो काम हो सधैं भरि घुम्छु
पानी खान पाए भने आराम सँग सुत्छु - के हो ?
३ लामो लामो लहरमा फल्ने मिठो फल
खादा भने मुख भरी हुन्छ जलै जल - के हो ?
४ सानी सानी नानी मिली बटुलेको खाना
पाए सम्म सबै खान्छन मिठो मानीकन के हो ?
५ मानिसको व्यबहारमा ठुलो काम दिन्छ
तल माथि पर्‍यो भने ज्यानै पनि लिन्छ - के हो ?
६ जती धेरै खाए पनि बढी हुने होइन
बरु उल्तै मिल्दै जान्छ खाने लाई चैन - के हो ?
७ दिन भरि कुन्नी कता मस्त सँग सुत्छ
रात पर्दा बत्ती बाल्दै गाउ गाउ डुल्छ - के हो ?
( उत्तर: १ - लामखुट्टे , २ - घडी , ३ - अङ्गुर , ४ - मह , ५ - बलेको स्टोभ , ६ - बिद्या , ७ - जुनकिरी )
my blog post - http://www.thegreendoctors.com/
Takealook at my webpage cruevalle.org